Sida loo soo celiya jailbroken iPhone a
Tallaabooyinka soo socda ayaa kaa caawin si loo soo celiyo iPhone a jailbroken. Waxaa muhiim ah in la ogaado in dib u soo celinta masixi doono wixii xog jirta oo dhan ka iPhone. Tani waxaa ka mid ah sawirrada ah oo dhan, macluumaadka xiriirka, videos, entry taariikheed, heeso ama macluumaad kale oo ku kaydsan aad iPhone. Sidaa darteed waa lagu talinayaa in ay qaataan gurmad ah ee xogta adigoo isticmaalaya Lugood iyo sidoo kale si ay u gudbiyaan ama u hagaagsan telefoonka in computer maadaama ay tani la raadsan karaa ka dib markii dib u soo celinta telefoonka ee.
Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in habka soo celinta qaadataa waqti qaar ka mid ah waxay ku xiran tahay sida xogta fara badan ayaa la keydiyaa iPhone. Haddii dib u soo celinta ka iCloud, markii uu ku xiran yahay xawaaraha internet ka. Ka hor inta soo celinta telefoonka, si loo hubiyo in nooca ugu dambeeya ee Lugood la geliyo.
Talaabada 1: Isku aad iPhone in aad Mac / PC.
Tallaabada 2: Marka uu furmo suuqa Lugood u muuqataa, guji si aad iPhone hoos AALADAHA (waxaa laga arki karaa in geeska midig ee sare socda dukaanka Lugood).
Tallaabada 3: Ka dooro Soo koobid tab ka dibna dooro Soo Celinta kaabta ... doorasho.
Tallaabada 4: dhakhso Lugood u muuqda weydiinaya haddii aad hubto in aad dooneyso in aad soo celiyo. Riix fursad u Soo Celinta aad u bilowdo nidaamka dib u soo celinta.
Talaabada 5: Your iPhone bilaabi doono ka dib markii uu soo celiyay in goobaha warshadda.
Talaabada 6: The logo Apple u muuqataa iyadoo la xirey kadibna iPhone aad. Marka Connect ah si aad u bilowdo screen u muuqataa, xiriiriyaan iPhone in computer ilaa hawshooda u dhamaato.
Tallaabo 7: Halkaa marka ay marayso, waxaa jira labo ikhtiyaar: meesha aad sidoo kale soo celin karaa gurmad hore ama calan kor u sida iPhone cusub. Dooro mid ka mid ah.
Tallaabada 8: Marka lagu sameeyey, Lugood ogaan lahayd iPhone oo aad ku fiican tahay inuu tago!
Faraqa u dhexeeya warsiinta iyo soo celinta
CUSBOONAYSIINTA iPhone ah kaliya ku rakibtay software ugu dambeeyay ama update in version macruufka ah oo aanu wax ka bedelo in xogta lagu kaydiyaa, oo ay ku jiraan xiriiro, songs, videos, sawiro, entries jadwalka ama macluumaad kasta oo kale. Soo celinta ayaa dhanka kale waxay tirtirtaa dhammaan xogta in lagu kaydiyaa aad iPhone oo resets in goobaha warshadda. Ka hor inta soo celinta iPhone, waxaa muhiim ah in dib u soo qaato on Lugood.
Dib u celi iPhone marka habayn ama uu lumo
Marka aad lumiso habayn iyo Marnna aad iPhone, nasiib wanaag waxaa jira hab u saamaxaya in ay soo celiso aad iPhone iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah laba hab
ID Apple password keddibna
Dib u celi habayn loogu qufulka screen
Sida loo joojiyo oo password ID Apple
Tallaabada 1. Tag ee website Apple loo yaqaan iForgot
Tallaabada 2. In sanduuqa talooyin ah, nooca ID Apple iyo guji Next. Haddii aad u halmaanteen la ID Apple aad, riix linkiga hoose - Ilowday ID Apple aad iyo raac tilmaamaha shaashadda.
Tallaabada 3. Aqoonsiga xaqiijinta ku dheehan Apple diri lahaa link xaqiijin ah in ay email la xidhiidha aqoonsiga iyo in lagu weydiiyo in aad ka jawaabtid su'aalaha ammaanka. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in aad loo xaqiijiyo taariikhda dhalashada.
Tallaabada 4. Change sirta xaqiijinta kadib. Waxaad si fiican dooran lahaa sir ah oo xoog leh. A password waa xoog badan yahay mid ka mid ah oo ka kooban xarfaha isku dhafan, tirada iyo jilayaal gaar ah.
Sida loo celi habayn loogu qufulka screen
Talaabada 1: Isku aad iPhone USB cable in aad Mac / PC. Si kastaba ha ahaatee, xilligan la joogo, lama xiriiriyaan dhamaadka si iPhone.
Tallaabo 2: Ku bilow Lugood.
Tallaabo 3: Ku hay batoonka aad iPhone iyo mari si loo xaqiijiyo. Markaas, awoodda aad iPhone.
Talaabada 4: Ku bilow dib u soo kabashada hab doorasho. Tan waxaa la samayn karaa adiga oo riixaya badhanka oo haysta guriga inta iPhone waa xiran iyo darafkiisa kale inta cable USB ah. Marka xiran, aad iPhone noqon doonaa. Waxaa muhiim ah in ay sii wadaan haysta button guriga ilaa suuqa kala Lugood u soo booda. Lugood ayaa kuu sheegi doona in iPhone hab soo kabashada ayaa la ogaan karo.
Talaabada 5: Soo Celinta iPhone ee Lugood adigoo gujinaya Ok, marka si degdeg ah ay u muuqataa. Markaas, dooro Tab Kooban iyo dooranayaan Soo Celinta kaabta .... Waxaa muhiim ah in la ogaado in habkan masixi doono dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka. Hubi in gurmad ah waa laga qaaday in ka hor inta this Lugood sida talaabadan soo celin doonaa taleefanka in goobaha warshad.
Talaabada 6: Marka dib loo soo celiyo, u isticmaalaan xogta gurmad ka gurmad la soo dhaafay. Haddii aad rabto in aad soo celin gurmad ka iCloud, waxaa lagama maarmaan ah in aad haysato aqoonsi tufaax iyo password la socoto aad iCloud gurmad file.
Xalilinta khaladaadka ku jira Lugood
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in fariimaha baadi marka la isku dayayo in lagu soo celiyo ama cusboonaysiiso iPhone. Fariimaha baadi Kuwaas ama farriimo digniin dhacaan sababtoo ah version wayn ee software ama server ka qaladaad la xidhiidha. Inta badan soo celin khaladaadka iyo arrimaha update loo hagaajin karaa iyadoo la raacayo shanta talaabo ee hoos ku qoran:
Talaabada 1: update Lugood. First cusboonaysiiso Lugood ay u version ugu dambeeyay ee la heli karo aad PC / Mac.
Talaabada 2: Ka dhex shaqeynta updates System: Cusboonaysii nidaamka qalliinka iPhone aad adigoo updates. Updates u Mac waxaa laga heli karaa website-ka iyo waxaa laga gali karaa halkan . Sidoo kale, haddii la isticmaalayo Windows ama nidaamyada kale ee ka hawlgala, hubi bixiyeyaasha OS lagama maarmaan u ah updates.
Talaabada 3: arrimaha Amniga Software. Hubi software gaarka ah ammaanka in keenaya ah arrinta iyo update ama gab tware usocodka in keenaya arrinta ka. Mararka qaarkood looga hortago software ammaanka updates ah iPhone. Sidaa awgeed waxaa muhiim ah inaad u dami ama mararka qaarkood uninstall si loo hubiyo in dib u soo celinta ama update ka shaqeeya.
Talaabada 4: System guuleysatey. Marka tallaabooyinka kor ku xusan waxaa lagu sameeyey, fiilada fiilooyinka USB aan loo baahnayn in ay yihiin pluged galay PC / Mac iyo guuleysatey aad nidaamka. Sidoo kale guuleysatey aad iPhone.
Talaabada 5: Isku day in ay sameeyaan dib u soo celinta ama update nidaamka hadda. Tani waa rajeynayaa. Haddii ay weli ma shaqeeyaan, isticmaali code qalad iyo isku day u hubinta bogga internetka ee Apple. Boggan waxa uu ku siinayaa liiska oo dhan codes baadi iyo qaladaad gaar ah oo la xidhiidha xeerka.
Easy Siyaabaha iPhone kaabta in Computer
Waa maxay Android Phone ka duwan iPhone
Best 17 Apps u iPhone
Bedelka Apps u dhaxaysa iPhone iyo Lugood
3 Siyaabaha iPhone kaabta
Ka Computer Bedelka Music inay iPhone
Save Messages ka iPhone in Computer
Ka iPhone tirto faylasha
> Resource > iPhone > Talooyin iyo tabaha on celinta iPhone